Five Nights at uFreddy, okusho "Five emizini Freddie" - lokhu kuyinto engavamile isiqophi umdlalo, eyakhululwa ngo-2014. Phakathi nalesi sikhathi Yaphathwa abayithandayo wakhe, kanye nenamba enkulu izitha. Lokho kungenxa yokuthi umdlalo mayelana nokubulawa ukwahlulelwa ku Pizzeria ongaqondakali, lapho zonke umlindi ebusuku iza ukusebenza unogada ngegama Mayk Shmidt. Waze has uhlamvu efanayo, lapho umdlali bazalwe.
Ngakho, ngo-pizzeria Mike elinde annimatorika abane abamelele irobhothi-izilwane: bear Freddie duck okuthiwa Chica, unogwaja Bonnie futhi ngobuqili Lis Foksi. Bazama ngazo zonke izindlela ukuba abhubhise unogada hhayi umvumele ukuba ngikhuthazele kuze kube sekuseni. Uma umdlali ekwazile sihlakaniphele annimatorikov futhi ahlale bathinteka emva ebusuku, ke izinga sidlulile. Lena encane zangaphambi umlando, sizoxoxa namuhla ukudweba Bonnie, unogwaja efanayo kuzo umdlalo computer kanjani.
Otherness-annimatorika unogwaja Bonnie
Purple Bunny Bonnie, okuzoxoxwa ngezansi, livela umdlalo "Five emizini uFreddy" hhayi ngokushesha, kodwa umsebenzi wesibili. Uhlakaniphe kakhulu futhi esebenzayo, mhlawumbe emincanyana iningi annimatorikov, okubi, ngobuqili futhi iyingozi kakhulu. Rabbit ikhanda ukulingana ezimbili omkhulu indlebe onsomi, intamo yakhe ebomvu imvunulo butterfly, kodwa emathuneni okufanayo umbala bass guitar. Manje sibheka indlela ukudweba Bonnie.
Kuyadingeka art Izimpahla
Uma unquma ukudweba unogwaja aphume umdlalo "Five emizini Freddie", udinga stock up irabha, ipensela ukuhola futhi landscape ephepheni. Ukukhathazeka mayelana ukuntula kwakhe ikhono kwezobuciko nakanjani akudingekile, ngoba sixoxa ngesibonelo nendlela ukudweba Bonnie, kancane kancane futhi ngokuningiliziwe lokho okwenzeka. Qhubeka.
A izinyathelo ezimbalwa empumelelweni
Ukuze uqale ukumaka ukuphuma ephepheni, okungukuthi, ukuhlukanisa phakathi izindawo elizowela ekhanda lakho, esifubeni kanye imilenze uhlamvu. Ishidi kufanele kubekwe nendawo, ngoba Bonnie ukudweba ekukhuleni esigcwele ku ishidi thwi ukukhwezwa ngeke isixazululo omuhle kakhulu. Rabbit ikhanda, phezu okuzoba izindlebe okukhulu, shiya isigamu elincane of ishidi. Kuyadingeka ukudweba indilinga encane - ekhaleni Bonnie futhi abanaye yima umbuthano omkhulu - kuzoba ikhanda unogwaja sika. Hlola lonke imodeli akunzima: ezindlebeni - kungcono ovals efanayo side, amehlo anjengamehlo isikwele nge imiphetho oyindilinga, futhi eduze ekhaleni annimatorika afanako isebangeni zombili izinhlangothi ezimbili, kunjengokungathi esikhulu ibhola nomunye.
Isinyathelo esilandelayo kuyoba ukudweba esifubeni unogwaja design. Ukuze wenze lokhu, ubambe ezintathu semi okusaqanda ngasekhanda Bonnie, kusukela komncane kuya komkhulu ngobukhulu. Okuqukethwe isandla iphuzu ukunamathela emzimbeni.
Izinyawo nezandla kufanele udwebe izakhi ngabanye zivaliwe ukukhulisa ukudluliswa uhlamvu kunendawo enkulu engahlolwa amarobhothi.
I last, esigabeni yokugcina umdwebo unogwaja yomdlalo ikhompyutha "Five emizini Freddie" ngeke prettification uhlamvu ngokubona kwayo. Lesi sibonelo sikhombisa omnyama nomhlophe okufushane annimatorika imvume. umculi ngamunye ukhululekile ukuba azinqumele indlela ukudweba Bonnie nendlela ukudweba. Okwenza kube onsomi, wena ihlanganise e niwubone umzimba wakhe ikhophi esiqondile unogwaja aphume umdlalo.
Kulabo abathanda umbuzo indlela ukudweba Old Bonnie, ngithanda ukusho ukuthi umehluko oyinhloko kusukela unogwaja edonswa kithi ukungabi namazinyo engenhla. Sula kubo irabha ukuze uthole ngokwakho ngezansi, futhi phambi kwakho - Old Bonnie. Yiba zokudala futhi izame!
Zezinwele Izimbali Ezikhangayo ogcwele ubuso
UMbazi Vuchetich Evgeny: Biography nemisebenzi
CPD: ukuthi kuyini nokuthi ungayisebenzisa kanjani